သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ - WoopShop ®
လှည်း / ₩0.00 0
WoopShop.com မှကြိုဆိုပါသည်။ WoopShop.com မှရှာဖွေစဉ်သို့မဟုတ် ၀ ယ်နေစဉ်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအကာအကွယ်ပေးသည်။ WoopShop.com သည်သင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောသတိပေးချက်များ၊
1 ။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
WoopShop.com သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏လာရောက်လည်ပတ်သူသို့မဟုတ်ဖောက်သည်အားလုံး၏ privacy ကိုလေးစားပြီးသင်၏အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးကိုအလေးအနက်ထားသည်။
WoopShop.com တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်၏အီးမေးလ်၊ အမည်၊ ကုမ္ပဏီအမည်၊ လမ်းလိပ်စာ၊ စာပို့သင်္ကေတ၊ မြို့၊ နိုင်ငံ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ လျှို့ဝှက်နံပါတ်စသည်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကို visitors ည့်သည်များနှင့်ပတ်သက်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်။ သတင်းအချက်အလက်သည်သင်တို့အတွက်ထူးခြားသည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုအမည်ဝှက်ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများထံမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသူတို့မှဆန္ဒအလျောက်တင်ပြမှသာကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းမည်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများသည်ဆိုက်နှင့်သက်ဆိုင်သောလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမှတားဆီးနိုင်ခြင်း မှလွဲ၍ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖြည့်ဆည်းရန်ငြင်းဆန်နိုင်သည်။
•ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများထံမှမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါ၊ ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အမှာစာချခြင်း၊ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်း၊ ပုံစံတစ်ခုကိုဖြည့်စွက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောအခြားလုပ်ဆောင်မှုများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အင်္ဂါရပ်များသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များနှင့်အတူ။ အသုံးပြုသူများကိုသင့်တော်သလိုအမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ မေးလ်လိပ်စာတောင်းခံနိုင်သည်။
•ကျွန်ုပ်တို့အားသတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ သင့်ကိုပိုမိုအဆင်ပြေအောင်ကူညီရန်၊ တောင်းဆိုမှုများသို့မဟုတ်တိုင်ကြားမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်၊ သင့်အားအသင့်တော်ဆုံးသောပြသမှုကိုကူညီရန်နှင့်သင့်အားအချက်အလက်များ၊ အရောင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များ၊ ကူပွန်များ၊ အပေါ်။
•သင်မှတ်ပုံတင်နေစဉ်အတွင်းသင့်အားသင်၏အမည်၊ ရေကြောင်းနှင့်ငွေတောင်းခံရန်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပေးရန်သင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အမျိုးအစားများသည်သင်၏အမှာစာများကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်ငွေတောင်းခံရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ သင်၏အမှာစာကိုစီမံစဉ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြproblemsနာများရှိပါကသင်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်သင်ပေးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသုံးနိုင်သည်။
•ဝင်ပြီးသည့်နောက်မည်သည့်အီးမေးလ်သတင်းလွှာ (သို့) သင်၏ကိုယ်ပိုင်စာရင်းပေးသွင်းမှု setting မှ link ကို သုံး၍ သင်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
•အသုံးပြုသူများနှင့်ပတ်သက်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာမဟုတ်သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆိုက်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းနိုင်သည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမဟုတ်သောအချက်အလက်များတွင် browser အမည်၊ ကွန်ပျူတာအမျိုးအစားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့်ဆက်သွယ်သူများ၏ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်သောနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။ ဥပမာ - လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အသုံးပြုသူများနှင့်အခြားအလားတူသတင်းအချက်အလက်များ။
•ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်သည်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်“ cookies” ကိုသုံးနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူ၏ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာကကွတ်ကီးများကိုသူတို့၏ hard drive ပေါ်တွင်စံချိန်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုခြေရာခံရန်နေရာချသည်။ အသုံးပြုသူများသည် cookies များကိုငြင်းဆန်ရန်သို့မဟုတ် cookies များကိုပို့နေချိန်တွင်သင့်အားသတိပေးရန်သင့် web browser ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သူတို့ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက၊ ဆိုက်၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများသည်စနစ်တကျလည်ပတ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ကျနော်တို့အစဉ်မပြတ်ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်တုံ့ပြန်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးကြှနျုပျတို့၏ website ဟာယပူဇော်သက္ကာတိုးတက်လာဖို့ကြိုးစားကြသည်။
(၃) ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုတိုးတက်စေရန်
(၄) အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်
ကျနော်တို့သာအမိန့်မှဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အမိန့်အားမရသောအခါအအသုံးပြုသူများသူတို့ကိုယ်သူတို့အကြောင်းများကိုသတင်းအချက်အလက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကဝန်ဆောင်မှုပေးလိုအပ်သောအတိုင်းအတာအထိ မှလွဲ. ပြင်ပမှာပါတီများနှင့်အတူဤသတင်းအချက်အလက်မျှဝေကြပါဘူး။
(၅) ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊
အသုံးပြုသူများသည်သူတို့ငါတို့သည်သူတို့မှအကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. ခံယူဖို့သဘောတူသတင်းအချက်အလက်များပေးပို့နိုင်ရန်။
အသုံးပြုသူများအမိန့်အပြောင်းအလဲနဲ့ပေးအီးမေးလ်လိပ်စာ, သာသူတို့အမိန့်နှငျ့ပတျသကျသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်မွမ်းမံမှုများပေးပို့ဖို့အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဒါဟာအစကသူတို့မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များတုံ့ပြန်ရန်အသုံးပြုနှင့် / သို့မဟုတ်အခြား requests သို့မဟုတ်မေးခွန်းများကိုနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူရွေးချယ်-in ကိုကြှနျတျောတို့၏စာပို့စာရငျးရန်ဆုံးဖြတ်သည်ဆိုရင်သူတို့ကမည်သည့်အချိန်ကအသုံးပြုသူအနာဂတ်အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိခြင်းမှနှုတ်ထွက်လိုလျှင်, ငါတို့သည်အသေးစိတ်ပါဝင်သည်ကြောင်းကုမ္ပဏီသတင်းပါဝင်သည်စေခြင်းငှါ, နောက်ဆုံးသတင်းများ, related ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုသတင်းအချက်အလက်အီးမေးလ်များ, စသည်တို့ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် တစ်ခုချင်းစီကိုအီးမေးလ်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူ၏အောက်ခြေတွင်ယူမှုဖျက်ညွှန်ကြားချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်သင့်လျော်သောဒေတာစုဆောင်းခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းအလေ့အကျင့်များနှင့်လုံခြုံရေးအစီအမံများကိုကျွန်ုပ်တို့ချမှတ်သည်။
ဆိုက်နှင့်၎င်း၏အသုံးပြုသူများအကြားအထိခိုက်မခံသောနှင့်လျှို့ဝှက်သောအချက်အလက်ဖလှယ်မှုသည် SSL လုံခြုံသောဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်ပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်များဖြင့်စာဝှက်ပြီးကာကွယ်ထားသည်။
•ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများအားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအခြားသူများအားရောင်းချခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထက်ဖော်ပြပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောတွဲဖက်များနှင့်ကြော်ငြာရှင်များနှင့်အတူလာရောက်လည်ပတ်သူများနှင့်အသုံးပြုသူများနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့်မျှဆက်စပ်ခြင်းမရှိသောယေဘုယျစုစည်းထားသောလူ ဦး ရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးနှင့်ဆိုက်ကိုလည်ပတ်ရန်သို့မဟုတ်သတင်းလွှာများသို့မဟုတ်စစ်တမ်းများပေးပို့ခြင်းကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် third-party ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုပေးအပ်ထားပါကသင်၏ကန့်သတ်ထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုဤတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားကျွန်ုပ်တို့မျှဝေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်များ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ ကြော်ငြာသူများ၊ စပွန်ဆာများ၊ လိုင်စင်ရသူများနှင့်အခြားတတိယပါတီများ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာများသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြုသူများကတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆိုဒ်များပေါ်ရှိအကြောင်းအရာများ (သို့) လင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့မထိန်းချုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆက်စပ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအသုံးပြုသောအလေ့အကျင့်များအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ထို့အပြင် ၄ င်းတို့၏အကြောင်းအရာများနှင့်လင့်များအပါအ ၀ င်ဤဆိုဒ်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေနိုင်သည်။ ဤဆိုဒ်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမူဝါဒများရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များအပါအဝင်အခြားမည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မဆိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းသည်ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်၏ကိုယ်ပိုင်စည်းကမ်းချက်များနှင့်မူဝါဒများအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
•ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ပေါ်လစီအပိုဒ်သည် Apple ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုများတွင် (Apple ကပေးချေသော) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုရှင်းပြသည်။ ထို့အပြင် Apple Pay ၏စည်းကမ်းချက်များကိုဖတ်သင့်သည်။ WoopShop မှသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် Apple Inc. နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
သင်ငွေပေးချေရန် Apple Pay ကိုအသုံးပြုသောအခါဘဏ်ကဒ်အချက်အလက်၊ အမိန့်ပမာဏနှင့်မေးလ်လိပ်စာတောင်းခံနိုင်သည်။ သို့သော် WoopShop သည်သင်၏ပုံစံမှမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမျှသိမ်းဆည်းမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကြော်ငြာသို့မဟုတ်အခြားလည်ပတ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့မျှဝေမည်မဟုတ် မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို။
• WoopShop တွင်ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအားအချိန်မရွေးအသစ်ပြောင်းရန်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုသတိပြုရန်အတွက်ဤစာမျက်နှာကိုမကြာခဏစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုသူများကိုကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအားအခါအားလျော်စွာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုသတိပြုမိခြင်းမှာသင်၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်ဟုသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။
•ဤဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်ဤမူဝါဒကိုလက်ခံကြောင်းပြသသည်။ ဤမူဝါဒကိုသင်သဘောမတူပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုမသုံးပါနှင့်။ ဤပေါ်လစီအပြောင်းအလဲများကိုတင်ပြီးသောအခါသင်ဆိုက်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည်ထိုပြောင်းလဲမှုများကိုသင်လက်ခံသည်ဟုမှတ်ယူလိမ့်မည်။
•သင့်တွင်ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ၊ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို့) ဤဆိုဒ်နှင့်သင်၏ဆက်ဆံမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ [အီးမေးလျ protected] or [အီးမေးလျ protected]
2 ။ စည်းမျဉ်းများနဲ့အခြေအနေများ
•သင်သည်သင်၏မိဘများသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်သင်သည်အနည်းဆုံးအသက် ၁၈ နှစ်သို့မဟုတ်ဆိုက်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သည်ဟုကိုယ်စားပြုသည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအားလုံးအတွက်သင်မူလကသင့်အားပေးအပ်ထားသောစကားဝှက်နှင့်မှတ်ပုံတင်ကိုအသုံးပြုသောမည်သူမဆိုဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအတွက်သင်သာတာဝန်ရှိသည်။
WoopShop.com သည်ကုန်လှောင်ရုံအမျိုးမျိုးမှတင်ပို့နိုင်သည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုထက်ပိုသောအမှာစာများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်စတော့ရှယ်ယာအဆင့်များနှင့်အညီသင်၏အမှာစာကိုများစွာသောအုပ်စုများသို့ခွဲခြမ်းနိုင်သည်။ သင်၏နားလည်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
•ဤစာမျက်နှာရှိသို့မဟုတ်အခြားနေရာများတွင်အခြားနေရာများတွင်မှလွဲလျှင်မည်သည့်အကန့်အသတ်မရှိ၊ စိတ်ကူးများ၊ ဗဟုသုတ၊ နည်းစနစ်များ၊ မေးခွန်းများ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ၊ မှတ်ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များအပါအဝင် WoopShop.com သို့မဆိုတင်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်တင်သွင်းခြင်းများအားလုံးသည်တင်ပြချက်များကိုကိုင်တွယ်လိမ့်မည်။ တင်ပြခြင်းသို့မဟုတ်တင်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည် WoopShop.com အားရေးသားပိုင်ခွင့်ကဲ့သို့သောကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကိုဖယ်ထုတ်ပြီး ၀ င်ခွင့်နှင့်လိုင်စင်နှင့်ပတ်သက်သော IP အခွင့်အရေးများကိုတရား ၀ င်လိုင်စင်ပေးရန်သဘောတူပြီး WoopShop တွင်မူပိုင်ခွင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။
•သင်သည်မှားယွင်းသောအီးမေးလ်လိပ်စာကိုအသုံးမပြုရ၊ သင်ကိုယ်တိုင် မှလွဲ၍ အခြားသူတစ် ဦး အဖြစ်ဟန်ဆောင်မည်မဟုတ်၊ သို့မဟုတ်ပါကတင်ပြချက်များသို့မဟုတ်ပါ ၀ င်မှုများ၏မူလအစနှင့် ပတ်သက်၍ WoopShop.com သို့မဟုတ်တတိယပါတီများအားလှည့်ဖြားခြင်းမပြုရ။ WoopSHop.com သည်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆိုမှတ်ချက်များသို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများအပါအဝင်မည်သည့်တင်သွင်းမှုကိုမဆိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။
WoopShop.com ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိစုဆောင်းထားသည့်အကြောင်းအရာများ၊ စာသားများ၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်အခြားပုံများ၊ ခလုတ်အိုင်ကွန်များ၊ အသံအပိုင်းအစများ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ပေးသွင်းသူများ။ အတိအလင်းပေးပိုင်ခွင့်မရှိသောအခွင့်အရေးအားလုံးကို WoopShop.com မှရယူသည်။ ချိုးဖောက်သူများကိုဥပဒေအရအပြည့်အဝတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်
•ကျွန်ုပ်တို့ကလက်ခံခြင်းမပြုနိုင်သောအမိန့်အချို့ရှိနိုင်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ အမှာစာပေးပို့ပြီးနောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်တတိယပါတီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ၏တစ်ခုတည်းသောတာ ၀ န်ဖြစ်သည်ဟုနှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူကြသည်။ ဤအဆင့်တွင်ကုန်ပစ္စည်း (များ) ကိုအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်မှုသည် ၀ ယ်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်းသက်ဆိုင်သည့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်အန္တရာယ်များကို ၀ ယ်သူကကျခံရမည်။
WoopShop.com တွင်တတိယပါတီများကပိုင်ဆိုင်ပြီးလည်ပတ်နေသောအင်တာနက်ပေါ်ရှိအခြားဆိုဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိနိုင်သည်။ WoopShop.com သည်မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောဆိုဒ်တွင်မဆိုတည်ရှိသည်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။
• WoopShop.com သည်အနာဂတ်တွင်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုအသိပေးခြင်းမရှိပဲပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။